Ngaba ukhe wacinga ngokuguqula into oyithandayo ibe lishishini? | Bezzia
UMaria vazquez | 12/01/2022 10:00 | Ukuzonwabisa
Ngaba ukhe wacinga ngokwenza i ishishini malunga nokuzonwabisa Uyilo okanye ubugcisa? Siqinisekile ukuba uninzi lwenu luza kube luyicingile loo nto kodwa kamva niya kuba noloyiko lokutsiba, ngaba siyaphazama? Namhlanje, injongo yethu kukuba uyithathe njengethuba lokufumana imali ngento othanda ukuyenza kakhulu.
Ngaba unobuchule bokupeyinta, ukuthunga, ukwenza ufele, ukubumba izinto ezenziwe ngodongwe, ukuluka okanye ukufota? Isibheno into eyodwa kunye lokwenyani namhlanje ibango ukuba ngokusebenzisa nomphakathi inokukunceda wenze imali ngendlela ozonwabisa ngayo. Maninzi amashishini anengeniso athe azalwe ngolu hlobo, kodwa ayingombandela nje wetalente nethamsanqa; ngasemva kuhlala kukho a isicwangciso, uqeqesho kunye nomsebenzi. Ngaba uyafuna ukwazi izitshixo zokuguqula into oyithandayo ibe lishishini? Sabelana ngazo nawe namhlanje
1 Yenza isicwangciso
2 Yithathe njengomsebenzi
3 Qeqesha kwaye ubuze
4 Wazise umsebenzi wakho
5 Yenza umanyano kunye neendlela ezintsha
Ukuguqula umbono ube lithuba kufuna isicwangciso. Y ukwenza isicwangciso Umntu kufuneka azibuze imibuzo ethile: Ngaba ndinazo izixhobo ezifanelekileyo zokuguqula into endiyithandayo ibe lishishini? Ngaba iyasebenza kwezoqoqosho? Ndifuna ukuthengisa ntoni kwaye kubani?
Ukonwabela umsebenzi wokuzilibazisa wokudala kunye nokuziphilisa kuwo zizinto ezahlukileyo kakhulu. Ukwenza ukuphila kuyo ngaphaya komsebenzi owenzayo, kuya kufuneka ubambe abaphulaphuli kunye jika into oyithandayo ibe ngumsebenzi. Okanye yintoni efanayo ukulungelelanisa into oyithandayo kwilizwe elintsonkothileyo leshishini kwaye oku akuyona into ephunyezwayo ngeentsuku ezimbini.
Ukuqwalasela oku kubalulekile cwangcisa icebo Ukususela ekuqaleni. Isicwangciso esiza kusebenza njengesikhokelo ngexesha lamanyathelo okuqala, awona anzima kakhulu! uhlala ukhumbula ukuba oku kuya kufuna uhlengahlengiso njengoko uqhubela phambili. Ukuba uyoyika imingcipheko, qala ucinge ngesicwangciso esikuvumela ukuba ufumane imali ngokusebenza ixesha elithile ukwenzela abanye kwaye unikezele esinye isiqingatha kwinto oyithandayo. Kuya kubakho ixesha lokuhamba.
Ukuba ufuna ukufumana imali kuya kufuneka uqale jonga into oyithandayo njengomsebenzi. Oko kukuthi, kuya kufuneka ubeke phambili kwaye ucwangcise iveki nganye ngokusekwe kungekuphela nje kwiiprojekthi ekufuneka uzifeze kodwa nakwezo misebenzi yongezelelayo ebandakanya ukuba usomashishini.
Ukuqala ishishini kwizinto esizithandayo kuyakhuthaza, kodwa ukuzimela nokuxhomekeka kuwe ithwele uthotho lweembopheleleko. Uya kufuna ixesha lokuqeqesha, ukudala, ukujongana nabathengi bakho kunye nokulawula icandelo lobugcisa leshishini. Kwaye ewe, i-ajenda ukuze ungalibali nantoni na.
Qeqesha kwaye ubuze
Mhlawumbi uchithe iminyaka uzinikele kolu hlobo lokuzonwabisa ngoku ucinga ngokujika ube lishishini. Kwaye asithandabuzi ukuba uya kuba ufumene kwiminyaka edlulileyo ulwazi olwenze ukuba uphucule, kodwa ukuba awunalo ulwazi lolawulo lweshishini kuya kuba nzima kuwe ukuba uqhube ishishini.
Uqeqesho lubalulekile. Thatha ikhosi yokuthengisa kwi-intanethi kunye norhwebo, accounting kunye nothungelwano ukufumana indlela yokufumana okuninzi kubo. Kwaye uqhagamshelane neengcali kwicandelo elinye okanye imibutho yoshishino enokucebisa kwaye ikuxhase kwiprojekthi yakho. Thetha nezinye iingcali Into yokuba baye baqalisa indlela efanayo owayiqala kwiminyaka eyadlulayo idla ngokukhanyisela. Kwaye kukuba sele befunde ngokusekelwe kwizigqibo ezimbi nezilungileyo, iimpazamo kunye nempumelelo.
Wazise umsebenzi wakho
Namhlanje, ukubakho kwi-intanethi kubalulekile. Unxibelelwano lwezentlalo sisixhobo esiphambili sokufikelela ekujoliswe kuko okanye kubaphulaphuli ekujoliswe kubo. Kodwa ukuze ugqame kuzo uya kufuna yenza uphawu njengengcali, umgca wegraphic apho abasebenzisi bachonga khona kwaye oko kukwenza ugqame kukhuphiswano.
Kuthungelwano, ngakumbi kwi-Instagram, olu yilo lophawu luba lufanelekileyo kakhulu. Kodwa musa ukulayisha iifoto zemveliso; Abathengi abanokubakho baya kuvelana nomsebenzi wakho ngokukhawuleza ukuba uyabavumela ukuba bafumanise indlela osebenza ngayo, zeziphi izixhobo ozisebenzisayo okanye ofumana kuzo inkuthazo; Elona cala lakho lobuqu.
Cinga ukuba ukongeza ekwenzeni imali ngezo mveliso uzenzayo, unokunikezela kwixesha elizayo izixhobo kunye nezitshixo ukuze umsebenzisi afunde ukwenza indalo yakhe. Iya kuba yindlela yokuwahlula-hlula umsebenzi wakho xa sele ukwazi ukuzenzela umngxuma.
Yenza umanyano kunye neendlela ezintsha
Nantoni na oyenzayo, kuya kuhlala kukho umntu owabelana ngombono wakho wobugcisa. Ukuzifumana kunye nokwenza intsebenziswano kunokuba negalelo ekukhuleni kweshishini lakho. Intsebenziswano Zombini kunye nezinye iiprofayili kuthungelwano kunye noshicilelo olukhethekileyo, bahlala bengamahlakani amakhulu.
Kwakhona kuya kukunceda ujike into oyithandayo ibe yishishini lokudala iindlela ezintsha okanye izinto eziluncedo kwimveliso yakho oko kwahlula kukhuphiswano. Xa uqalisa naliphi na ishishini, kubalulekile ukugxila ekwahluleni.
Ngaba ukhe wacinga ngokujika into oyithandayo ibe lishishini? Gxumela phezulu! Ukuba asiyonto efuna utyalo-mali olukhulu lokuqala, yizame! Ukuba ucinga ngayo kakhulu, uya kuyikhumbula kwakhona. E-Bezzia sithembisa ukwandisa ezinye zezi ngongoma ngokukhawuleza kunye nezixhobo ezininzi kunye nolwazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Ukuzonwabisa » Ngaba ukhe wacinga ngokuguqula into oyithandayo ibe lishishini?